Umphefumlo ukuba ungene ngamasango omhlaza unqamle umgca ungene kwizibonakaliso zehlabathi udlule kuzo, kwaye usuka kumasango e-capricorn ubuya njengemana, ingqondo ephezulu, ubuntu, umntu ozicingelayo, oziqondayo zonke izinto zomhlaba.
Vol. 2 JANUWARI, 1906. 4
I-Zodiac liwotshi enkulu yeenkwenkwezi yesithuba esingenasiphelo ethi, ngokungummangaliso, ngokungummangaliso, isuse ixesha lokuzalwa kwendalo iphela, ubude bexesha labo kunye nokubola, kwaye ngaxeshanye kumise uguquko lweseli yegazi ekujikelezeni kwalo ngomzimba.
I-Zodiac yibhayibhile engapheliyo, imbali kunye nesicatshulwa sendalo, ukugcinwa, kunye nokutshatyalaliswa kwezinto zonke. Yirekhodi yazo zonke izinto ezidlulileyo nezangoku kunye nolwekamva lekamva.
I-Zodiac yindlela yomphefumlo ukusuka kwinto engaziwayo yokwaziwa kwaye ungene ngaphakathi nangaphandle. I-Zodiac ekufuneka ifundwe, kwaye yiyo yonke le nto, ikwiimpawu zayo ezilishumi elinambini ezimelwe emntwini.
I-Zodiac enomjikelezo wayo weempawu ezilishumi elinambini inika isitshixo kubuchwephesha bengadalwanga kunye nakwimbonakalo ebonakalayo yendalo iphela. Zoba umgca othe tyaba ukusuka kumhlaza uye kwi-capricorn. Ke imiqondiso engaphezulu komgca imele indalo engadibaniyo; imiqondiso engezantsi komgca othe tyaba ukusuka kumhlaza ukuya kwi-capricorn imele indalo ebonisiweyo kwizinto zayo zokomoya kunye nezengqondo kunye nomzimba. Iimpawu zomhlaza, i-virgo, kunye ne-libra, zimele ukuphefumla komphefumlo ebomini kunye nefom, ukukhula kobume kwisondo, kunye nokuphefumla komphefumlo okuyo. Iimpawu ze-libra, i-scorpio, i-sagittary, kunye ne-capricorn, zimele ukuvela komphefumlo ngokwabelana ngesondo, umnqweno, ingcinga, kunye ngokukodwa, umjikelezo wokubonakaliswa, ukwakheka kunye nokuphuhliswa komphefumlo ngommandla obonakalayo wehlabathi, kunye nokubuyela kwaphakade i-noumenal engabonakaliyo.
Ukuba iziko eliqala ukwenzeka ukuba libe ngumhlaza njengomphefumlo lingaphumeleli ukufikelela ekuzazini ngokupheleleyo nasekugqibeleleni, njengoko kubonisiwe luphawu lwentloko, okanye ubuntu, ngelixa lingaphambi kokubhubha kobuntu-obo buntu benziwe imiqondiso yobomi, ifom, isondo, umnqweno, kunye nengcinga-emva koko ubuntu buyafa kwaye ubuntu buye buye nexesha lokuphumla, kwaye kwakhona kuqala ngokuphefumla ukwakha obunye ubuntu. Oku kuyaqhubeka emva kobomi de umsebenzi omkhulu ugqitywe ukugqitywa kwaye ubuntu abusafuneki ukuba zizezomzimba, ngaphandle kokuba kuyathanda.
Ukuphefumla kwaba yinto yokuqala ukubonakala ekuqaleni kokudalwa kweli lizwe; yagquma phezu kolwandle lobomi kwaye yaphefumlela ekusebenzeni iintsholongwane zobomi; besacubungula kwaye baphefumla ngaphezulu kwamanzi obomi, ukuphefumla kubangele ukuba bathathe inxaxheba kwi-ethereal-astral form, kamva ukuba ikhonkrithi kwiindlela zomzimba zesini, apho umphefumlo uphefumlela ngaphakathi kwinxalenye yawo. Ke umnqweno okwimo yomntu waphendula kumphefumlo wengqondo kwaye wanwenwela kwingcinga yomntu. Ngokucinga kwaqala uxanduva lomntu; ingcinga yikarma. Umphefumlo, ngokucinga, waqala ukuhambisa ubomi kunye nefom, isondo kunye nomnqweno, kwi-vesture ye-ego ephezulu, eyinto eyodwa. Ayinakuphakama emzimbeni womntu de umntu athobele ubuntu bakhe kwiziphelo zakhe.
Ubuntu ayibobobomi, nangona njengomphefumlo ngumzamo wokuqala wokuphefumla ophefumla ubomi ngokwenziwa, ukumisela ikhondo lobomi, kwaye ujikeleze icandelo lokusebenza kobomi. Ubuntu bodwa abuyi fom, nangona kulwakhiwo ngalunye lobuqu kwenza iifom. Umntu ngamnye udala uhlobo lokuyilwa kobuntu bakhe obulandelayo obuya kwakhiwa bubomi kwaye buzalwe kwihlabathi ngokwesondo. Ubuntu ayisiyokwabelana ngesondo, nangona yabangela ukuba umntu obekade esabelana ngesondo ikhule ibe yenye yezesondo ukuba ubuntu bube nokuzilolonga ngaphakathi kubo, ukuze badlule kwimililo yesondo kwaye bahendelwe kumandla ehlabathi, ukuba ngokwesini ubunye bunokulinganisa ukujikeleza kwangaphandle nangaphakathi komphefumlo, ukuba yinto engenakuhlaselwa kwaye ikwazi ukuqhuba ikhosi ngokukhuselekileyo ngokusebenzisa isaqhwithi sezulu, inkanuko, nokuvuthuza ngesondo, ngesondo ukwenza iminqweno yosapho kunye nelizwe, kwaye ngaphakathi kwaye ngelixa Imizimba yezokwabelana ngesondo ukulungelelanisa, ukudibanisa kunye nokudibanisa into ibe nye, ebonakala ngathi yahlukile ekusebenzeni kwayo kabini njengomphefumlo kunye nobuntu, kodwa eneneni, yinto enye esebenzayo. Ubuntu ayisiyiyo inkanuko, nangona ivusa umnqweno kwimo yayo yokugqibela ethi ke ibe nomtsalane kwaye itsale ubunye kubomi obonakalisiweyo. Emva koko ubuntu busebenza ngomnqweno, kwaye boyise ukuxhathisa obonelelwa ngumnqweno. Ngale ndlela ingqondo iyaqina kwaye yomelele, kwaye yeyona ndlela iphakathi apho umnqweno udluliselwa kumnqweno (iipisces).
Ubuntu abuqondwa, nangona uvelisa ingcinga ngesenzo sawo ngokuphefumla komnqweno kwaye ke oko kuzisa inkqubo yokuthuthumbisa kobuThixo, inkqubo leyo umntu ngamnye ahlangabezana nentlungu nolonwabo, intlupheko kunye nobutyebi, uloyiso kunye noloyiso, kwaye kuvela Isithando somlilo sokuxenga ngokunyulu kunye nokuzola kukungafi. Ingqondo ephezulu iyafana nento le ibizwa ngokuba kukodwa. Yinkqubo ye-I-am-I, leyo egubungela ubuntu kunye nenxalenye yomzimba ebomini. Ingqondo esezantsi luphawu lwengqondo oluphezulu ngaphakathi kunye nobuntu kwaye lelo yinxalenye yengqondo ephezulu eye yavela emzimbeni. Eyona nto ibizwa ngokuba yingqondo yengqondo ephantsi, esebenza ngokusebenza kwisangqa kunye nengqondo, ingqondo engaphandle.
Ingqondo ngoku inemisebenzi emihlanu. Ezi bezisoloko zithethwa njengokuntywila, ukunambitha, ukuva, ukubona, kunye nokuchukumisa okanye imvakalelo, kodwa kukho eminye imisebenzi emibini yengqondo engaziwa ngokubanzi kwaye inqabile ukuba ithethe ngayo kuba ayisetyenziswa okanye inamava ngabaninzi. Zisetyenziswa ngezona senge zibalaseleyo kuphela kwaye ukusetyenziswa kwazo kugqiba umntu. Ezi zinzwa mibini kunye nemisebenzi yengqondo yi-I-am-I kunye no-I-am-wena-wena-wena-wena-I-sens. Izitho ezihambelanayo eziza kuphuhliswa ukulungiselela le misebenzi yindawo yomzimba kunye ne-pineal gland, ngoku inxenye kwindawo yomntu oqhelekileyo. Amachule, ngoku adumbated kuphela, aya kuba lwazi nobulumko, ukwazi nokuba yinto.
Ingqondo esezantsi kufuneka idibane nento, nokuba nengqondo ephezulu okanye enye into ngeemvakalelo kunye neminqweno. Ezi meko zimbini zizigaba zothando. Le yona ihlala inxulunyaniswa neemvakalelo kunye neminqweno, kwaye yiyo le nto abantu bayibiza ngokuba “luthando.” Uthando oluphezulu olungaqhelekanga ukubizwa, lolunengqondo ephezulu. Olu thando luyekisiwe kwiimvakalelo nakubuntu; Eyona nto iphambili kuyo yimigaqo yokuzincama, ukuzinikela ngenxa yemigaqo engafunekiyo.
Kwenzeka njani ukuba ingqondo ibe likhoboka lezinto ezivalelayo, leenkanuko, zomzimba, nangona ingqondo-yokuphefumla yayingumyili wazo kwaye ifanele ukuba ngumlawuli wazo? Impendulo ifunyanwa kwimbali edlulileyo yengqondo yomzimba. Yile nto: emva kokuba ingqondo-yokuphefumla idale izivamvo kwaye sele iqalile ukuzisebenzisa, ukukhohlisa okuveliswa zizimvo kwakudambisa ingqondo ukuzazisa ngobuntu.
Elo nxalenye yobuntu ebizwa ngokuba yingqondo esezantsi iphefumlelwa ubuntu (isilwanyana) ngokuzalwa. Umzimba wenzeka ngokwasemphefumlweni wokuphefumla, oko kukuthi, ingqondo ephantsi ingena emzimbeni ngokuphefumla ngokwasemzimbeni, kodwa ayisiomoya wokuphefumla. Ukuphefumla ngokwasemzimbeni kubangelwa kukuphefumla kwengqondo, kwaye oku kukuphefumla kwengqondo kukuqondo ophantsi. Ezo mphefumlo zengqondo iphakamileyo, ezizodwa, yinto eseBhayibhileni ebizwa ngokuba yi-pneuma engcwele, kwaye ngamanye amaxesha ibizwa ngokuba ngumphefumlo womoya. Ayizukuphinda ibe ngumzimba de umntu azalwe ngokutsha, kwaye indoda iphinde yenziwa ngokutsha ngenxa yokuba i-pneuma, ngamanye amagama ubuntu obugcweleyo, bunemizimba epheleleyo.
Njengoko umhlaba wesigcawu usikelwe umda kwiwebhusayithi yokujikeleza kwayo, ngokunjalo nomhlaba womntu unqunyelwe kwiingcamango zakhe zokuluka. Umhlaba wezinto ezizodwa ungumsebenzi weqela leengcinga apho umluki ahamba aze aqhubeke eluka. Isigcawu siphosa umtya waso wesilika kwaye siwubethelele kwinto ethile, nesinye, nesinye, kwaye kule migca sakha umhlaba waso. Ingqondo yandisa imigca yayo yokucinga kwaye ibanamathele ebantwini, kwiindawo, nakwiinjongo, kwaye kwezi, ngezi, ngezi ngcinga zakha umhlaba wazo. Kuba ilizwe lendoda nganye Indalo yakhe ilinganiselwe nguye; ukuthanda nokuthanda, ukungazi kwakhe kunye nolwazi kwakhe zigxile kuye. Uhlala kwindalo yakhe, I-confins eyakha ngayo. Kwaye into akholelwa ukuba iyinyani yimifanekiso eqingqiweyo azalisa ngayo. Njengoko i-web inokutsalwa kwaye isigcawu siqhubeke nokwakha enye, ke kubomi ngamnye ubuntu obunye buye babangele ukuzakhela indalo entsha, nangona ubukhulu becala ubuntu bungayazi.
Ubuntu kunye nobuntu bodwa zisetyenziswa ngokuchaseneyo njengoko ziya kufumaneka ekubonisaneni ezona chaso zivunyiweyo apho zombini zinikezelwa njengentsingiselo yemikhwa kunye neempawu zengqondo nomzimba. Ukuthathwa kwala magama, nangona kunjalo, zichasene nentsingiselo yazo. Ubuntu buthatyathwe kwi ngunyana ngamnye, Isandi esiphuma ngaphakathi, okanye ukuvakala ngokusebenzisa. umntu Ngaba yayiyimaski eyayisenziwa ngabalingisi bakudala kwimidlalo yabo, neyayithetha into yonke yokunxiba enxibe ngumdlali weqonga ngelixa etsala nawuphi na umlinganiswa. Ubuntu buvela I-dividuus, ayibonakali. Intsingiselo kunye nolwalamano lwala magama ke yenziwe icace kwaye yahluke.
Umntu ngamnye ligama kuphela. Inokusetyenziswa kwindalo yonke, emhlabeni, okanye emntwini, okanye nakuphi na okumela ngokupheleleyo umgaqo wokuzazi.
Ubuntu yimaski, ingubo, iimpahla ezinxitywa bubuntu obuthile. Ubuntu yinto ehleliyo engabonakaliyo esisigxina ecinga, esithetha, nesenza ngayo ngemaski okanye ubuntu bayo. Njengomdlali weqonga umntu ozimeleyo uzazisa ngesixhobo sakhe kunye nenxalenye yomdlalo xa uqala umdlalo, kwaye, ngesiqhelo, uyaqhubeka nokuzazisa ngenxalenye kunye nokudlala kuzo zonke izinto zobomi bokuvuka. Ubuntu benziwe bubomi kunye nefom kunye nesondo kunye nomnqweno oya kuthi, xa uhlengahlengiswe ngokufanelekileyo kwaye udityaniswa, uhlanganise umatshini wokucinga apho ukuphefumla kuphefumlela khona kwaye ucinga ngako.
Ebuntwini kukho umthi ovela kuwo, ukuba ubuntu obuthile, umlimi, uyaondla aze ayichebe, angaqokelela aze adle iziqhamo ezilishumi elinambini, aze akhulele kubomi bokungafi. Ubuntu yifom, isinxibo, imaski, apho ubuntu buvela buye buye buye buthathe inxaxheba kwindima-yedrama yephakade eli ngoku edlalwa kwinqanaba lehlabathi. Ubuntu sisilwanyana esikhuselwe ngumntu ngamnye, umhambisi wexesha, ngenkonzo kwaye ukuba sondliwe, sikhokelwe kwaye silawulwa, siya kuthwala umgibeli waso kumathafa asentlango nakwiindawo ezikhula emahlathini, kwiindawo ezinobungozi, kusentlango yehlabathi umhlaba wokhuseleko noxolo.
Ubuntu bubukumkani, apho umntu ngamnye, inkosi, ejikelezwe ngabefundisi bayo, iimvakalelo. Ukumkani ubamba inkundla kumagumbi asebukhosini wentliziyo. Ngokunikeza kuphela izicelo zobulungisa neziluncedo kubalawulwa bakhe inkosi iya kuzisa ucwangco, isemthethweni kwaye inyanzelisiwe inyathelo lokukhuphisana kunye nemvukelo, kwaye inelizwe elinokulungelelana nelilungisiweyo apho isidalwa ngasinye esiphilayo senza indima yaso ukuze kulunge ilizwe.
Ekwakhiweni ngokutsha komntu ngaphambi kokuzalwa kwanokuxhonywa kunye nobuncwane bokuzalwa kwayo emva kokuzalwa, kusoloko kusenziwa indalo kunye nokukhula kwendalo yonke ukusuka kwinqanaba lokuvela kwayo, kunye nembali yayo yonke iminyaka. Kobu buntu kuhlala ubuntu-umyili, umlondolozi, kunye nomyili wendalo-kwindibano yocweyo lomzimba. Kule ndibano kukho ithala leencwadi lomlingo elinengxelo yalo yeminyaka kunye namaxesha ayo eenkcubeko zangomso, kukho ii-alembics zayo kunye nezibethelelo apho ubugqi bobuchwephesha bunokukhupha ekudleni komzimba i-quintessence eyi-elixir yobomi, Incindi yoothixo. Kule gumbi le-alchemical i-alchemist inokuthi ibeke iminqweno kunye neenkanuko kunye neminqweno yobuntu kwizihlambululo, ukuguqulwa, kunye nokuzithoba, okwaziwayo kubugcisa bomlingo. Apha udlulisa izinyithi ezisisiseko zenkanuko kunye nobunjani bakhe obuphantsi bokuncibilikiswa kwegolide.
Apha umlingo we-alchemist utya umsebenzi omkhulu, imfihlakalo yeminyaka-yokutshintsha isilwanyana ibe ngumntu nendoda ibe nguthixo.
Ubuntu buxabiseke kakhulu. Ukuba ubuntu ngoku bufanele butshabalale kutheni kwakhiwa ngaphambili kwaye kutheni kuvunyelwe ukuba bukhule? Ukuba ngoku sikwimo yethu yangoku, ubuntu buzakutshatyalalaliswa omnye unokubuyela kumaphupha angwevu wokungasebenzi ngobusuku, ngobusuku behlabathi, okanye angalala ngesandi esidlulayo sangomaxesha kanaphakade, okanye amiswe ibanjwa elingafiyo phakathi kwexesha, ukuba nolwazi kodwa ngaphandle kwamandla okusebenzisa; isikripthi ngaphandle kwemarble okanye chisel; umbumbi ngaphandle kwevili okanye udongwe; ukuphefumla ngaphandle komnqweno, umzimba okanye ifom; uthixo ngaphandle kwendalo yakhe.
Umgcini wegadi akazange afumane siqhamo ngaphandle komthi wakhe; Umdlali weqonga akakwazanga ukudlala indima yakhe ngaphandle kwesinxibo sakhe; umhambi wayengenakuhamba ngaphandle kwesilwanyana sakhe; ukumkani wayengayi kuba ngukumkani ngaphandle kobukumkani bakhe; Ugqirha we-alchemist wayengenakusebenza ngaphandle komlingo ngaphandle kwelebhu yakhe. Kodwa lo mthi uvelisa iziqhamo ezikrakra okanye ezingenamsebenzi, okanye akukho ziqhamo konke konke, ngaphandle komgcini wegadi awuthengise; Isinxibo siya kuba singenayo ifomu okanye yinxalenye yokudlala ngaphandle komlingisi wokuyinxiba; isilwanyana besingazi ukuba siyaphi ngaphandle komhambi ukuba asikhokele; Ubukumkani babungayekiswa ukuba bubukumkani ngaphandle kokumkani obukumkani bokulawula; ilabhoratri iya kuhlala ingenamsebenzi ngaphandle kokuba umlumbi asebenze kuyo.
Umthi bubomi, ifom yesinxibo, umnqweno wesilwanyana; oku kuthatha imizimba yokwabelana ngesondo. Umzimba wonke lilabhoratri; ubunye ngumbhali; kwaye ukucinga yinkqubo yokudlulisa. Ubomi ngumakhi, ifomu sisicwangciso, isini sisiseko kunye nokulingana, umnqweno ungamandla, wacinga inkqubo, kunye nomntu ngamnye ongumyili.
Singakwazi ukwahlula ngokulula phakathi kobuntu kunye nobuntu. Xa ucinga ngombandela obalulekileyo wokuziphatha kunye nokuziphatha okuvakalayo amazwi amaninzi aya kuvakala, ngalinye lizama ukubanga ingqalelo kwaye litshise abanye. La ngamagama obuntu, kwaye elona lithetha kakhulu liya kuhlala likhona. Kodwa xa intliziyo ifuna inyani ngokuthobeka ngenyaniso, ngephanyazo ilizwi livakala kamnandi kangangokuba lisaphikisana. Eli lizwi lokubulela lothixo wakho wangaphakathi-ingqondo ephezulu, eyedwa.
Sisizathu, kodwa hayi inkqubo ekuthiwa kukuqiqa. Iyathetha kodwa kube kanye kumxholo ngamnye. Ukuba iibhulashi zayo zenziwa apho kuza imvakalelo yamandla namandla kunye nesiqinisekiso sokuba wenze okulungileyo. Kodwa ukuba umntu uye wema ekuxoxeni kwaye emamele amazwi alengqondo iphantsi, ke uya kukhathazeka kwaye adideke, okanye azikhohlise kwinkolelo yokuba elinye lamazwi amaninzi lilizwi elinye. Ukuba umntu uphikisana nelizwi elinye okanye ongavumiyo ukumamela xa lithetha, uya kuyeka ukuthetha kwaye abe engenandlela yokwazi ngokulungileyo nokungalunganga. Kodwa ukuba umntu umamela ngononophelo kwaye uyakukulandela ngqongqo oko akuthethayo, uya kwandula ke afunde ukunxibelelana nothixo wakhe kuzo zonke izinto ezibalulekileyo, kwaye ahambe ngoxolo ngalo lonke uqhwithela lobomi de abe ngumntu ngamnye, -I-Consciousness.